Nagarik News - बजेटपछि बिरामी
जेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान, सम्भावित अनिकाल लगायतका विषय चौतारीमा छलफल भइरहेका थिए। आखिर चौतारी न हो, देश विदेशको राजनीतिको बहस पनि नहुने कुरै थिएन। नेपाल सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको विषय आज चौतारीको मुख्य एजेन्डा बन्न पुग्यो।
चौतारोमा मास्टर, किसान, वृद्ध, युवा, व्यापारी र सर्वसाधारण थिए। बजेटले पार्ने प्रभावबारे हरेकलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको चासो थियो। मास्टर र कर्मचारीलाई बजेटले बढाउन सक्ने तलबभत्ताको मतलब थियो। वृद्धवृद्धालाई थोरबहुत थपिन सक्ने वृद्धभत्ताको चासो थियो। व्यापारी भने बजेटपछि बढ्न सक्ने बजारभाउ र व्यापारबारे सोचमग्न थियो। सर्वसाधारणलाई बजेटले बढाउन सक्ने महँगीको चिन्ता थियो। युवा भने कार्यकर्ता भएबापत राजनीतिक दलले मिलाइदिन मिल्ने युवासम्बन्धी कार्यक्रम सरकारले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने ध्याउन्नमा थियो। किसान रनभुल्ल थियो। हरेक बजेटले किसानलाई सहुलियत दिने दाबी त गर्थ्याे तर उसले कहिल्यै पैसा तिरेर समेत मलखाद पाउँदैनथ्यो। त्यसैले ऊसँग आशा र अपेक्षा खासै थिएनन्। सबैसँग आ–आफ्नो कित्ताको चासो र चिन्ता थियो। तर, गाउँको स्कुललाई बजेट आउला कि नआउला? कुलोपैनीलाई बजेट पर्ला कि नपर्ला? मोटरबाटो सुधार गर्न सरकारले पैसा छुट्याउला कि नछुट्याउला भन्ने जिज्ञासा कसैमा थिएन।
–'वृद्धभत्ता त बढाउला नि।'
–'युवा स्वरोजगारको कार्यक्रमलाई राम्रो बजेट छुट्याउने हो कि होइन?'
–'महँगी बढ्ला कि घट्ला?'
सबैका आ–आफ्ना चासा थिए।
सबैले आफ्नो ज्ञान र क्षमताअनुसार बजेटको अनुमान र विश्लेषण गरे।
'यो सरकारले कम्तीमा बजेट चाहिँ ल्याउन पायो। कसोकसो गुल्टिसक्याथ्यो।' प्राविको मास्टर बजेट छाडेर सत्ता दौडधूपको विषयमा केन्द्रित भयो। 'प्रधानमन्त्री धेरै चलाख भएर बच्या हो,' सत्ताधारी राजनीतिक दलको ग्राम कार्यकर्ताले भन्यो, 'नत्र सबैले विदेशीका सामु घुँडा टेकिसक्या थे।' उता गठबन्धन दलको ग्राम कार्यकर्ता पड्कियो, 'प्रधानमन्त्रीकै बुद्धिले बच्या भन्ने चाहिँ नठानौँ ल। हाम्रो अध्यक्ष कमरेडको सुझबुझपूर्ण निर्णयले गर्दा नै यो सरकारले बजेट ल्याउन पाको हो। हाम्रो अध्यक्षले प्रधामन्त्रीको समेत पद लत्याउने हिम्मत नगर्याब भए सरकार बच्याबच्यै हो।'
'अहिले चौताराँ बसेर गफ गर्न त निकै सजिलो छ। तर, को कति पानी माथिको र'छ भन्ने त सबैले देखिसक्या छन्। विदेशीले प्रधानमन्त्री बनाइदिने भो भनेर सरकार ढाल्ने विज्ञप्ति निकालिसक्या होइन र? पछि प्रधामन्त्रीले सम्झाएपछि मात्र पछि हट्या त हो नि।' सत्ताधारी ग्राम कार्यकर्ताले खिस्याउँदै भन्यो।
गठबन्धन दलका ग्राम कार्यकर्ताबीच निकै भनाभन चल्यो। उनीहरूको भनाभनले चौताराको शान्ति खलबलिन पुग्यो। उनीहरूको मुख छेडाछेड हात हालहालमा पुग्ने छेकछन्द देखेपछि एकजना वृद्धले हस्तक्षेप गरे। 'बेक्काराँ गाउँका दाजुभाइ किन झगडा गर्छाैं हँ,' उनले सम्झाए, 'तिमीहरू जुन–जुन पार्टीका भए पनि भोलि गारोसारो पर्दा तिमर्का अध्यक्ष आएर सहयोग गर्ने होइनन् क्यारे। आखिर काम लाग्ने भनेका गाउँटोल र छरछिमेकी नै हुन्। जो प्रधानमन्त्री भए पनि तिमर्का भाँडाँ' सामल हाल्दिने होइनन् होला। विनसित्ति रातो मुख नगर केटा हो।' वृद्धले हकारेपछि ठिटाहरू ओइलाएजस्ता भए।
बहस र छलफलमा लयबद्ध चौतारो युवाहरूको रडाकोले लयहीन भयो। आखिर छिमेकको लय, समाजको लय र देशको लय भत्काउने राजनीतिले चौतारोको लय भत्काउनु खासै नौलो कुरा पनि थिएन। युवाहरू चुप लागेपछि उपस्थित सबैजना बोल्ने विषय नै बिर्सिएजस्ता भए। चौतारोमा गम्भीर मौनता छायो। मास्टरले मौनता तोड्यो, 'बजेटपछि त यो सरकार टिक्ला जस्तो छैन।' यतिबेरसम्म चुपचाप रहेको किसानले भने, 'सहमति नै सरकार फेर्ने भा छ क्यारे।' उता वृद्धले अनुभवका आधारमा राय राखे, 'सहमति हुँदैमा लागू हुन्छ भन्ने के छ र? यस्ता सहमति त कति भए कति?'
बजेटबाट सत्ता परिवर्तनको विषयमा केन्द्रित भएको चौतारी बहसमा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाको सामाजिक परिचालकले अनौठो कुरा गर्योि। उसले भन्यो 'सरकार ढल्ला नढल्ला, यसै भन्न सकिन्न तर बजेटपछि हाम्रा नेताहरू बिरामी पर्न सक्छन्।' उसका कुराले सबैको ध्यान तान्यो।
'बजेटले नेता बिरामी पर्छन्? कसरी नि?' प्राविको मास्टरले सोधे।
'बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुनका लागि नेताहरू बिरामी हुनैपर्छ। नेता बिरामी पर्छन् अनि मात्रै सरकार परिवर्तनको सरगर्मी सुरु हुन्छ। अस्ति पनि आरजु म्याम र सभापति देउवाको स्वास्थ्य उपचारपछि सरकार ढाल्ने खेल सुरु भएको हो। अझ महरा कमरेड पनि स्वास्थ्यजाँचकै लागि दिल्ली जानुभएको थियो होला। लोकतन्त्र ल्याउन पनि गिरिजाप्रसादको स्वास्थ्य उपचार गर्नुपरेको थियो। गिरिजाप्रसादको स्वास्थ्य जाँच गर्न दिल्ली जाँदा नै १२ बुँदे सहमति भएको हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले यो बजेटपछि हाम्रा नेताहरू पक्कै पनि बिरामी पर्छन्।'
परिचालकको कुरा बढो चाखलाग्दो थियो।
'अब बिरामी चाहिँ को पर्ला नि?' वृद्धले सोधे।
'बिरामी जो पनि हुन सक्छन्। रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादर देउवा, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, माधवकुमार नेपाल जो पनि बिरामी हुन सक्छन्। तर, कमरेड प्रचण्ड चाहिँ बिरामी पर्न सक्ने सम्भावना अधिक छ। भर्खरै पार्टी एकीकरणको दौडधूपले उहाँलाई थकित बनाएको हुनसक्छ। सात सयजनाको केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्थापनले उहाँको रक्तचाप पनि बढेको हुन सक्छ। सात सयलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटै मात्र विकल्प भनेको सत्ता हो। अर्कोतर्फ भावी प्रधानन्त्री तपाईं नै हो भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको कुरा सुन्नमा आ'छ। यी सबै कुरालाई विचार गर्दा कमरेड प्रचण्ड नै बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ।'
उपमा अलङ्कार र प्रेमसूत्र
–गाउँले बलदेव हाम्रा पूर्वजहरू उपमानको सहारा लिई वर्ण चिनाउने वा चिन्ने गर्थे। गाईको जस्तो गोडा= गाईगोडा। गाईगोडे ग। यहाँ गाईको जस्तो उपमान र गोडा चाहिँ उपमेय हो। गाईगोडे विशेषण हो र...
बैंसमा म ह्यान्डसमको हद थिएँ रे!
राजेन्द्र थापा, लेखक सानैदेखि लेख्ने, पढ्ने बानी थियो। आठ वर्षकै उमेरमा कविता लेखेको थिएँ। चौध वर्षको छँदा लेखेको मेरो कविताले राष्ट्रिय पुरस्कार पायो। सत्र वर्ष पुग्दा मैले लेखेका केही कविता गीत...